Uthando - ukuthi umuzwa emangalisayo, ukumemeza izimbongi. Ngivele abantu abafana useyili ongabonakali, baphoqeleka ukuba enze ongenangqondo futhi ngezinye izikhathi kancane silly, kodwa lezi zinto ezinhle. Nokho, ngaso sonke isikhathi lokhu umuzwa kuyinto reciprocity entweni. Ngezinye izikhathi kuyenzeka ukuthi intombazane kuyinto crazy othandweni nendoda alikhulumi nanokukhuluma bheka isiqondiso sakhe. Nokho, azizona iziphukuphuku, Muhle, bakwazi ukuziphatha ngendlela ebenza babe nesithunzi futhi ingubo kahle. Kodwa into ukububula, sengathi ngenhloso, awusebenzi ukubona uhla close. Okufanele ukwenze kuleli cala?
Akubona bonke, yebo, ancike le ndlela yokuqala, indlela charm indoda amaphupho abo. Kodwa uyini ukukholelwa ezeni nje uma eqhathaniswa naso ithemba esintengayo ukuba nge okhethiweyo wakhe? Ngakho hamba ku nhlanhla, Izanusi zonke izinhlobo amantombazane, ebusuku yizinyembezi e komqamelo. umkhonyovu abaculi abaningi abadlala izintokazi ongaqaphile abanhliziyo ubuhlungu kakade unrequited. Kodwa ukupela kungenzeka ukwenza bebodwa. Kulokhu, awudingi ukusiza noma nabathakathi abazama ngazo zonke izindlela ukudweba imali. Ngakho ake siphendule umbuzo indlela bewitch indoda ekhaya.
Ukuze uqale, isinqumo wena kahle ukuthi imiphumela kungaba idlule konke okulindelekile yini noma cha. Ukuphila komuntu - akulona ithoyizi. Ngakho-ke, beqala ukuthatha isinyathelo uma ngiphoqelekile uqinisekile ukuthi ufuna ukuphila nalo muntu konke ukuphila kwakhe.
Gobe, broths, potions ... Empeleni, izindlela indlela charm indoda mass kakhulu. Kodwa isenzo izitshalo ezithile, nabathakathi abaningi babe nendima enkulu imikhuba yabo. Ngezinye izikhathi imbali eyodwa noma iqabunga amancane efiselekayo ukuba isihloko imizwa unrequited yathululela kuwe uthando nokweqisa. Ikakhulukazi enamandla ubhekwa umphumela izitshalo ezifana amahlamvu ezintathu yimani niqonde. Kuyinto le ngxenye ungeze ukunambitha ngasiphi owesifazane ukupheka isidlo, wenze inhliziyo beat lover ngokushesha phambi kwakhe.
Elinye ithuluzi elinamandla ibizwa ngokuthi isabelo izinto siqu ethandekayo. Awazi kanjani charm indoda? pohitte ngokucophelela izicathulo zakhe futhi nalowo azithobe phansi embhedeni. Izinkolelo bathi ngokushesha kakhulu into simthande izokubonisa umusa futhi uyolala ebusuku kule embhedeni. Kukholakala ukuthi amandla izimpahla zabo, ikakhulu izicathulo ezigugile isikhathi eside, njalo edonsela umnini wayo.
Enye indlela kungase kutholakale sendlela charm indoda kubhekwa isiko nge amber. Kumelwe ngempela zenzeke ngoLwesihlanu ekuseni, ngokushesha nje lapho intombazane asukume embhedeni. Okuhle kunakho konke ukuthi, uma aphuzi itshana ayevumela uzobe bricked isinambuzane. Kukholakala ukuthi lokhu yikona kwandisa imiphumela lokubhula. Amber ukuthatha entendeni yesandla sakhe sobunxele. Endaweni efanele senhliziyweni yakho. Vala amehlo akho futhi uphumule, ukucabanga ngokwengqondo lover wakhe. Lokhu kufanele kube enemininingwane ngangokunokwenzeka, kuhlanganise izakhi ezincane kunazo zonke Ingaphandle. Khumbula buka, uhambo, ukumamatheka, ukuthinta, nesimo sobuso bakhe. Musa yokuwuthola party futhi umlingisi, imikhuba. Ngemva kwalokho, nabo bonke uthando lwami ukwanga itshe futhi ngobumnene bopha e ucezu kasilika Indwangu imibala ebomvu noma pink. Lenqwaba okuholela kumele agcinwe ngeviki ngaphansi komcamelo wakho. Njalo ekuseni ngoba kulezi zinsuku eziyisikhombisa ezizayo iqala umkhuba. Kucatshangwa ukuthi kakade ngosuku lwesishiyagalombili othandekayo kumelwe bahlangane futhi bebaqaphelisa.
Ngaphambi ukusheshe phezu Internet befuna iseluleko sendlela bewitch indoda, ucabangisise. Mhlawumbe umlingani wakho nje kangifanele okuwe, ngenxa nje ayibukeki uthando amanothi noma ukuthinta othile esiqondisweni sabo. Futhi uma kunjalo, kungakhathaliseki ukuthi kubalulekile ukuba vusa amandla aphakeme futhi bachithe bebodwa kulowo owenzelwa akaboni injabulo yakhe?
I-Cheesecakes - iresiphi ene-manga nabanye